မြေကွက် ရောင်းရန်နှင့်ငှားရန် အပေါ် Realtyww Info
မြေကွက် in Karu
မြေကွက် in Abuja
မြေကွက် in Maitama
မြေကွက် in Pineuilh
1 - 10 ၏ 52025 စာရင်းများ
ရောင်းရန်ရှိသည် | 0.37 ပြီးတော့
ထုတ်ဝေသည် Proponent Properties Limited
Lot For Sale In Maitama, Abuja
A nicely located plot with an uncompleted structure and servant quarters onaland measuring 1400sqm in Maitama. Title is C of O.
ရောင်းရန်ရှိသည် | 0.17 ပြီးတော့
Properties Land Pineuilh € 53 000 Hai - Ref :8601-sf
Properties LandPINEUILH€ 53 000 HAIPrice included agency fees: € 53 000Fees : 10,42% TTC*Price excluding agency fees : € 48000Agency fees: €5 000* Agency fees at the cost of the PurchaserAgence Eleonor :Sainte Foy La Grande+33(0)5 57 69 59 33
ရောင်းရန်ရှိသည် | 0.4 ပြီးတော့
ထုတ်ဝေသည် Terrie Simpson
အိမ်ခြံမြေများတွင်မြေကွက်တစ်ကွက်သို့မဟုတ်မြေကွက်သည်ပိုင်ရှင် (များ) ပိုင်အချို့ပိုင်သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်မြေကွက်သို့မဟုတ်မြေကွက်ဖြစ်သည်။ အများကြီးကိုအခြေခံအားဖြင့်အချို့သောနိုင်ငံများရှိအိမ်ခြံမြေများသို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံများရှိမရွေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း (လက်တွေ့အားဖြင့်တူညီသောအရာ) ဟုသတ်မှတ်သည်။ စာရေးတံ၏ပိုင်ရှင် (များ) သည်လူတစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ် ဦး ထက်ပိုသော (သို့) ကုမ္ပဏီ၊ ကော်ပိုရေးရှင်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရ၊ များစွာသောပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံကိုအချို့နိုင်ငံများတွင်အခကြေးငွေရိုးရိုးလေးဟုခေါ်သည်။ အများကြီးကိုကျောက်ခင်းခင်းခြင်းသို့မဟုတ်အလားတူတိုးတက်မှုမှအပကျန်မြေကွက်ငယ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဥပမာတစ်ခုကားရပ်နားရာနေရာဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ပိုင်ရှင်များပိုင်ရှင်များပိုင်မြေများအဖြစ်ပိုင်ရှင်များကိုပိုင်ဆိုင်ရန်ရည်ရွယ်သောမြေကွက်များဖြစ်သည်။ အခြားသောအိမ်ခြံမြေအမျိုးအစားများနည်းတူ၊ ပုဂ္ဂလိကပါတီများပိုင်မြေများသည်ပိုင်ရှင်များမှခရိုင်သို့မဟုတ်မြူနီစီပယ်ကဲ့သို့သောဒေသန္တရအစိုးရများသို့ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်အခများကိုပုံမှန်ကောက်ခံသည်။ ဤရွေ့ကားအိမ်ခြံမြေအခွန်အိမ်ခြံမြေများ၏ခန့်မှန်းတန်ဖိုးအပေါ်အခြေခံပြီး; အပိုဆောင်းအခွန်များသောအားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အိမ်ခြံမြေရောင်းအားလွှဲပြောင်းရန်သက်ဆိုင်သည်။ လမ်းပိတ်ဆို့မှုသို့မဟုတ်လမ်းဘေးစသည့်အဆောက်အအုံများသို့မဟုတ်မြေလွတ်မြေရိုင်းပေါ်တွင်အိမ်တစ်လုံးဆောက်လုပ်ရန်အတွက်သက်ရောက်မှုအခကြေးငွေများကဲ့သို့သောအစိုးရ၏အခြားအခကြေးငွေများဖြစ်နိုင်သည်။